Maxaa ka soo baxay Shirkii uu hoggaaminayay RW Kheyre ee looga hadlayay cafinta daymaha Somaliya? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka soo baxay Shirkii uu hoggaaminayay RW Kheyre ee looga hadlayay...
Maxaa ka soo baxay Shirkii uu hoggaaminayay RW Kheyre ee looga hadlayay cafinta daymaha Somaliya?
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta guddoomiyay shirka todobaadlaha ah ee looga hadlo dar-dargelinta qorshaha barnaamijka deyn cafinta dalka.
RW Kheyre ayaa faray wasaaradda maaliyadda, hey’adaha qaybta ka ah ka shaqeynta qorshaha deyn cafinta iyo guddigii loo xil saaray dhammeynta qorshaha dalka daynta looga cafinayo in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan buuxinta shuruudaha, si guul looga gaaro himilooyinka ummadda Soomaaliyeed.
DF Somaliya ayaa buuxisay dhammaan shurudihihii ku xirnaa SMP1, SM2 iyo SMP3, waxaana dhammaan hey’adaha maaliyadda dunida iyo wadamada deymaha ku leh Soomaaliya ay ammaaneen sida dowladda ay uga go’antahay ka mira dhalinta qorshaha deyn cafinta dalka oo heer aad u wanaagsan soo gaaray.
cafinta daymaha Somaliya